Xoghayaha arimaha dibadda dowladda Ingiriiska oo booqasho kedis ah ku tagay Muqdisho,kulana la qaatay madaxwaynaha Dowladda KMG Soomaaliya. – Radio Daljir
Xoghayaha arimaha dibadda dowladda Ingiriiska oo booqasho kedis ah ku tagay Muqdisho,kulana la qaatay madaxwaynaha Dowladda KMG Soomaaliya.
Muqdisho, Feb 2 – Xogahayaha arimaha dibadda dowladda Ingiriiska William Hague ayaa markii ugu horaysay booqasho ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Socdaalka William Hague oo uu ku wehliyay danjiraha dowladda Ingiriiska u qaabilsan arimaha Soomaaliya ayaa ahaa mid aan horay loo sii shaacin.
Xoghayha arimaha dibadda Ingiriiska William Hague ayaa waxaa xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ku qaabilay madaxwaynaha dowladda faderaalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo sidoo kale danjiraha cusub ee dowladda Ingiriiska ugu qaybsan arimaha Soomaaliya ka gudoomay waraaqihiisa aqoonsiga danjire.Huge oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay wadanka Soomaaliya inuu yahay wadan si’aad ah uguuldaraystay.
Safarka William Hague ee Muqdisho ayaa waxaa uu yahay kii ugu horeeyay ee wasiir arimaha dibadda ah oo kasocda dalka Ingiriiska uu ku tago magaalada Muqdisho muddo labaatan sanadood laga joogo,waxaana socdaalkan uu imaanayaa xilli dowladda Ingiriisku qabanqaabinayso shir ay isugu keenayso dhamaan qaybaha kale duwan ee Soomaaliya 24ka bishan.